W/Cadaalladda oo Faah-faahin ka bixisay 19 maxaabiis Budhcad badeed ah oo laga keenayo Seychelles | FooreNews
Home wararka W/Cadaalladda oo Faah-faahin ka bixisay 19 maxaabiis Budhcad badeed ah oo laga keenayo Seychelles
fooreMar 25, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)- Agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalladda Somaliland Maxamed Muuse Xaaji Galaydh, ayaa ka hadlay kooxdii u horeysay ee budhcad badeed ah oo dalka la keenayo oo ka kooban 19 qof oo laga soo qaadayo Jasiirradda Seychelles oo lagu maxkamadeeyay isla markaana ay ku xidhnaayeen muddo.
Agaasimaha Guud ee wasaaradda cadaalladda iyo garsoorka, ayaa sheegay inay maxaabiistaasi oo dhammaantood u dhashay koonfurta Soomaaliya ay iyagu dalbadeen in lagu xidho Somaliland, waxaanu yidhi “Dadka Soomaaliyeed ee budhcad badeedda u xidhan oo caalamku in badan naga codsaday inaanu qaabillo,waanu aqbalay anagoo eegayna codsigii caalamka, codsigii iyaga (maxaabiista) ka yimidna eegayna. Ragga halkan (Somaliland) la keenayaa waa dad u dhashay Koonfurta Soomaaliya. Puntland way xasiloon tahay iyada maxaabiisteeda gooni ayaa loo geynayaa maxaabiista.”
Mr. Galaydh wuxuu intaasi ku daray “Laakiin dadkan la inoo keenayaa waa dad u dhashay koonfurta Soomaaliya oo soo codsaday ayaa la keeni karaa iyo kuwa kale ee Somaliland u gasha ee dambigaasi gala sida xeerka iyo heshiisku dhigaayo. Waxaanu u dirnay halkay ku xidhan yihiin saraakiil ka tirsan Wasaaradda Cadaalladda si ay si cad ugu soo taabtaan codsigooda iyo dalabkooda.”
“Dadka Seychelles ku xidhan oo ah kooxdii u horeeyay waxay u ooyayeen in dhul dad ay afgaranayaan,meel ay ku tukadaan, meel dad ay afgaranayaan oo ehelkoodu ku soo booqdaan la geeyo. Iyagaa afkooda ka soo dalbaday in la geeyo Somaliland. Iyagoo ka eegaya dantooda, nolashooda ayaahooda dambe,”ayuu yidhi Agaasimaha guud ee cadaalladda oo maanta u waramayay Telefishanka madaxa banaan ee Horn Cable TV.
Agaasimaha oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Markaa anaguna waanu u diyaar-garaynay halkii ay ku xidhnaan lahaayeen oo qorshahoodii wuu naga dhammaaday. Waxaana taas nagu kalifay anagoo qadarinayna heshiiskii la dagaalanka budhcad badeedda ee aanu caalamka la galay iyo codsigaas ay codsadeen maxaabiistaasi Soomaaliyeed. Kooxdan u horeysa ee imanaysaa waa 19 xubnood. Markii aanu la hadalay ay lahaayeen ilmaadeerayaal meesha naga qaada.”
Agaasimaha guud wuxuu sheegay in tallaabadani ay ka dhalatay heshiis beesha caalamku la gashay xukuumadda Somaliland, isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Sidaad ogsoon tihiin xukuumadda Somaliland iyo dawladaha Ingiriiska iyo Seychelles heshiis ayay wada galeen. Xeerkii la sameeyay ee la dagaalanka budhcad badeedda iyo wareejinta maxaabiistu nidaam dheer ayuu soo maray labada Gole ee Wakiiladda iyo Guurtidda ayuu maray waana la ansixiyay.”
Previous PostWADANI oo awoodiisa ku muujiyay dhoola-tus weyn oo ay Taageereyaashiisu ka sameeyeen Ceerigaabo Next PostXildhibaan Baashe oo ka hadlay buuxinta xilka G/Ku xigeenka 1-aad ee Wakiiladda